Sida loo Play wmv in Lugood si fudud oo dhaqso
Ma ciyaari karaa wmv in Lugood? Haa, Lugood ma aha codsiga saaxiibtinimo marka ay timaado ciyaaro videos qaabab sida wmv iwm Lugood ayaa taageeray qaabab video ka mid ah oo kaliya QuickTime iyo MPEG-4, oo files dhamaan ".mov", ".m4v", ama ". mp4 ". Sida caadiga ah, kaliya marka video ah oo lagu ciyaari karo Apple ciyaaryahan QuickTime u gaar ah, waa lagu dari karaa si Lugood. Sidaas awgeed waxa macquul ah Lugood ma in ay la jaan qaada wmv, qaab video ah ee ay Apple soo horjeeda ugu weyn - Microsoft.
Si loo xaliyo dhibaatada aad ku ciyaaro wmv in Lugood, aad u baahan tahay si loogu badalo wmv in Lugood qaab socon. Just heli hoos ku wmv in ay Lugood Converter hoos ku qoran.
Qeybta 1: Hel Best & Professional wmv in ay Lugood Converter
Qeybta 2: wmv Free in Lugood Converter
Qeybta 3: Online wmv in Lugood Converter
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan diinta wmv in Lugood
Taageerada 150+ qaabab: Beddelaan video in QuickTime MOV, M4V, MP4, AVI, MKV, wmv, iyo in ka badan.
Professional Video Converter: Waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay aan khasaaro tayada wax. Xitaa waxay u bedeli karaan si 3D iyo HD videos.
Conversion Speed ​​sida dhaqsaha badan: Marka la barbar dhigo tartamaya kale, ka dhabayso videos at 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta.
Xoog DVD gubi: Waxaa ka gubtay video in kasta oo qaab si DVD ee tayo sare leh.
Lugood Video metadata Editor: Waa ku dari kartaa oo edit metadata (sharaxaad, jilaa, Jilaa, iwm) in ay wax ka mid ah videos aad soo bixi.
Sida loo badalo wmv in Lugood Iyadoo Video Converter Wondershare
Mid ka mid ah saddex dariiqo oo hoos ku qoran in ay sameeyaan shaqo this Isticmaal:
Hit ah badhanka si ay u dajiyaan files wmv in app this.
Hit "Add Files" ikhtiyaarka in ay leeg- tahay tan app ee ay u dajiyaan aad doonayay wmv videos in app this.
Jiid oo hoos u wmv gudbiyo aad rabto in aad app this
App Tani waxay taageertaa diinta Dufcaddii. Waxaad dajiyaan karaa oo loogu badalo dhawr files wmv waqti.
2. Dooro ay taageerayaan qaab Lugood ah sidii qaab wax soo saarka
Sida kor ku xusan, Lugood taageertaa MPEG-4 ee MOV, MP4, qaab M4V. Halkan, waxaan qaadi MP4 tusaale ahaan.
In guriga dhankiisa midigta oo interface ka, ku dhufatey "Qaabka Output" button in arbushin ilaa suuqa kala qaab wax soo saarka. Halkan, waxaad ka furan kartaa liiska qaab hoos-hoos in ay doortaan MP4 hoos yaala qaybta ka ah "Qaabka"> "Video". Dabcan, waxaad u tagi kartaa "Apple" category in ay doortaan mid ka mid ah si toos ah u-filaayo in halkii qaab wax soo saarka.
3. Play wmv in Lugood
Wmv Si bilaabaan in ay diinta ka Lugood, kaliya riix "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa interface this app ee. Bal eeg, tan Video Converter waa diinta files wmv in an Lugood qaab saaxiibtinimo. Waxaad ka arki kartaa waqtiga Boqolkiiba Buuxi oo haray. Just ha app this ordo ee asalka ah.
Markii diinta video la sameeyo, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka garaacida ah "Folder Open" button. Markaas, aad gacanta jiidi karaan faylasha wax soo saarka ka folder saarka maktabadda Lugood ah. Sidaas, waxa aad dareemi kartaa si xor ah u ciyaaro wmv in Lugood!
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo wmv in ay Lugood Video Converter for Windows
# 1. Free wmv in Lugood Video Converter: Wondershare Video Converter Free
Ma doonaysaa ah diinta qalabeed video BILAASH AH? Wondershare Video Converter Free Noqon kartaa doorashadaada koowaad. Waxa ay taageertaa wax ku dhowaad video caadi ah oo diinta ka maqal ah. Xitaa, waxaad u isticmaali kartaa sida editor video ah iyo video downloader. Just u qaataan in ay jar, dalagga, ku dar Cinwaan ama saamaynta si aad video.
Qasaarooyinka: app waxa kaliya ee kuu ogolaanaysaa inaad badalo si caadi ah videos, 3D iyo HD videos waa laga reebay. Sidoo kale ma waxa aad isticmaali karto si ay u gubaan video inay DVD. Waxa ugu muhiimsan waa in aad isha video tayada lumin laga yaabaa.
1. Anigu ma furi karo files wmv in QuickTime.
QuickTime taageertaa MP4, M4V iyo MOV. Waxa aanu taageeraan wmv. Waxaad ku rakiban kartaa qaybaha QuickTime sida Perian ama Flip4Mac in la kordhiyo QuickTime taageeray qaabab. Ama isticmaalka Converter video ah si loogu badalo wmv in QuickTime qaabab socon.
Tan iyo markii ciyaaryahanka QuickTime taageertaa xadidan videos, waxa kale oo aad isku dayi kartaa in qaar ka mid kale oo QuickTime in laydin sii ciyaaro videos.
2.I ma jiidi karo files wmv filim folder Lugood maaraynta.
Sababtu waxa weeye in wmv aan Lugood taageeray. Waxaad u baahan tahay si loogu badalo wmv in Lugood qaabab socon hore.
3. badan ayaan faylasha wmv in aan computer oo yaaban hadii uu jiro ciyaaryahan walba inuu ii ogolaado inaan u ciyaaro aan iPhone iyo iPad.
Waxaa jira dad badan saddexaad - barnaamijyadooda video ciyaaryahan xisbiga si aynu aad daawato videos in kasta oo qaab on aaladaha Apple aad. Just akhri maqaalkan ku Video Player Apps (macruufka & Android) .
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play wmv in Lugood